Microsoft Teams အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（91.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Microsoft Teams
သင်ဟာအဖွဲ့ဖော်တော်များနှင့်အတူအသင်းဖော်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ, တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ချစ်ရသူများနှင့်တနင်္ဂနွေလုပ်ဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရှိမရှိ Microsoft Teams သည်အရာရာကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လူများအားအတူတကွစုစည်းရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည် chats, အစည်းအဝေးများ, ဖိုင်များ, အလုပ်များ, အလုပ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လူတို့နှင့်အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်. အသက်တာသို့အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဘဝကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပြီးအသက်ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဘဝကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဘဝကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အိမ်တွင်အလုပ်များကိုစီမံရန်သို့မဟုတ်အံ့အားသင့်စေသောမွေးနေ့ပွဲကိုစီမံရန်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုအတူတကွရယူပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသောအစည်းအဝေးများမှတစ်ဆင့်အသင်းဖော်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပူးပေါင်းမှုနှင့် built-in Cloud Storage တွင်ပါ0င်သည်။ သငျသညျ Microsoft အဖွဲ့များအတွက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
•အသင်းဖော်များ, မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်လုံလုံခြုံခြုံနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ဗွီဒီယိုအစည်းအဝေးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းသတ်မှတ်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလင့်ခ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်ဖိတ်ကြားခြင်းအားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါ။
•စကားပြော 1-1 သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အုပ်စုဖွဲ့စကားပြောခြင်းများတွင်။ @mention လူများအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရန် chats များ။
•အထူးသီးသန့်လိုင်းများသည်အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများအတွက်အာရုံစိုက်သည့် Workspace ကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
• GIFs, Emojis နှင့် Message Animations များသည်စကားလုံးများမလုံလောက်သည့်အခါသင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အစီအစဉ်များနှင့်စီမံကိန်းများကိုအတူတကွပြီးမြောက်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ပါ။ •အလုပ်စာရင်းများကသင့်အားအလုပ်စီမံကိန်းများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အစီအစဉ်များတွင်ပါ0င်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အလုပ်များကိုသတ်မှတ်ထားခြင်း, သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့ရက်များကိုသတ်မှတ်ပြီးလူတိုင်းကိုတူညီသောစာမျက်နှာတွင်သိမ်းထားရန်ပြီးစီးသောအလုပ်များကိုဖြတ်ကျော်ပါ။
• Chats တွင် File Sharing သည်အလုပ်တာ0န်များသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစီမံကိန်းများအပေါ်ညှိနှိုင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
• Cloud သိုလှောင်မှုသည်မျှဝေထားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များကိုသွားရန်လွယ်ကူစေသည်။
• Dashboard View သည်မျှဝေထားသောအကြောင်းအရာများ, ဖိုင်များ, အလုပ်များ, လုပ်ငန်းများ, လင့်များအားလုံးကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါကြောင့်သင်အရာများကိုရှာဖွေရန်အချိန်ဖြုန်းစရာမလိုပါ။
• Screenshare, Whiteboard သို့မဟုတ် Virtual Roads တွင်အများအားဖြင့်သင်၏အလုပ်အစည်းအဝေးများမှထွက်ပေါ်လာရန်။
သင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း - •သင်၏အချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ပြင်ပရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လုံလုံခြုံခြုံလုပ်ဆောင်ပါ။
•ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံမှုရှိ subscription passwords ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။
• Microsoft 365 မှသင်မျှော်လင့်ထားသောစီးပွားရေးအဆင့်လုံခြုံရေးနှင့်လိုက်နာမှု။
* သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ဖြင့် Microsoft အသင်းများကိုအသုံးပြုသည့်အခါရရှိနိုင်ပါ။
** ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏စီးပွားဖြစ်အသွင်အပြင်များမှာ Microsoft 365 ကိုစီးပွားဖြစ်0ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်အလုပ်အတွက် Microsoft အသင်းများအားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏0န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသို့မဟုတ်သင်ရရှိနိုင်သော0န်ဆောင်မှုများအကြောင်းမသေချာပါက Office.com/teams သို့သွားရန်သို့မဟုတ်သင်၏အိုင်တီဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
အသင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်လိုင်စင်ကိုသင်သဘောတူသည် (Aka.ms/eueulatamamsmobile) နှင့် privacy terms များကိုကြည့်ပါ။ အထောက်အပံ့သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်အတွက် [email protected] တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ အီးယူကန်ထရိုက်အကျဉ်းချုပ် - Aka.ms/eucontractsummary
ဘာအသစ်လဲ Microsoft Teams 1416/1.0.0.2021134301
Createapoll directly inagroup chat. Tap the next to where you type your message, then tap "Polls"
စကားေပြာစကလုံး ရိုက်မလိုနည်းပညာ အရမ်းမိုက်
Bullied Doggy Benjamin
Do something for ph version:))
NAY SAN AUNG
Very good for meeting.
Hlaing Yamin Tun
Good app.Really useful.